सार्वजनिक शौचालयमा धानका बोरा ! – Daunne News
सार्वजनिक शौचालयमा धानका बोरा !
By कृशला सापकोटा	 On मंसिर ७, १६:००
शौचालयको प्रयाग शौच गर्नकै लागि हुन्छ । केही समयअघि मात्र नेपालाई नै खुला दिसामुक्त देश घोषणा गरिएको छ । तथ्यांकलाई आधार मानेर घोषणा गरिए पनि व्यवहारिक रूपमा भने यो पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
अझैं पनि अधिकांश ठाउँमा शौचालय नै छैनन् । भएका शौचालय पनि प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् । ग्रामीण क्षेत्र मात्रै होइन, धेरै जनसंख्या भएका सहरमा पनि पर्याप्त सार्वजनिक शौचालय नहुँदा खुला ठाउँमै दिसा देख्न सकिन्छ । बढ्दो आधुनिकीरणसँगै हुने निर्णय तथा घोषणाहरू सहरी क्षेत्रको अवस्थाका आधारमा गर्ने गरिएको छ ।
काठमाडौंजस्ता सहरमा बसाई व्यवस्थित भए पनि ग्रामीण जीवन कठिन छ । सरसफाइको चेतना पनि गाउँमा त्यति प्रभावकारी छैन । घोषणा गर्नकै लागि स्थानीयको अनुकुलता, आवश्यकता र महत्वलाई मध्यनजर नगरीकनै बनाइएका संरचना र यस्ता घोषणाहरूले खासै प्रभाव पारेको देखिँदैन ।
यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो बझाङको सदरमुकाम चैनपुरको सार्वजनिक शौचालय । चैनपुरको खुला मञ्चमा तीन वर्षअघि बनेको सार्वजनिक शौचालय नामको मात्रै छ । यो शौचालयभित्र पस्न सक्ने अवस्था छैन । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले जिल्लालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्नका लागि बनाएको शौचालय केही समय त प्रयोगमा आयो तर अहिले यो कुनै खण्डहरभन्दा कम छैन ।
यो सार्वजनिक शौचालयको स्नागृहमा धानका बोरा राखिएको छ । नुहाउन तातो र चिसो पानीको व्यवस्थासहित बनेको शौचालय धान धन्क्याउने ठाउँका रूपमा परिणत भएको छ । दुई कोठा (महिला र पुरुष) शौच गर्ने र एउटा स्नानगृहसहितको छ । शौच गर्ने कोठाभित्र छिर्न सकिने अवस्था छैन । बजारमा आउने सर्वसाधारणको सहजताका लागि बनाइए पनि यसको उपयोग हुन सकेको छैन ।
जताततै छरपस्ट दिसापिसाव र गन्धले भित्र छिर्न सकिँदैन । तर पनि कोही आपत् परेकाहरू नाकमुख थुनेरै भए पनि पिसाब गर्न जाने गर्छन् । तर स्नानगृहमा भने धानका बोरा भण्डारण गरिएकाले बन्द भएको छ ।
पानी अभावका कारण शौचालय प्रयोविहीन भएको जयपृथ्वी नगरपालिकाकी उपप्रमुख जुना जाग्रीले बताइन् । जिविसको मातहतमा रहँदा अलिअलि सञ्चालनमा आए पनि स्थानीय तह आएदेखि पूरै वेवास्ता गरिएको छ । जसका कारण बजारमा आउने अधिकांश यात्रु खुला रुपमा शौच गर्न बाध्य छन् ।